လပြည့်ဝန်း: မျိုးဆက်သစ် ရှင်(၁၀၀)ပြုပွဲ နှိုးဆော်လွှာ။
တရားတည်းဟူသော အမြိုက်ရေကို သောက်ရသူသည် အထူးသန့်ရှင်း ကြည်လင်သောစိတ်ဖြင့် ချမ်းသာစွာနေရ၏၊။
ဘဂ၀တော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ
အစီအစဉ်။ ။ ဆရာတော်အရှင်ဇောတိပါလ(လပြည့်ဝန်း)
ဦးဆောင်ကာ တပည့် ဒကာ/ဒကာမများ
ရည်ရွယ်ချက်။ ။ အနာဂတ်သာသနာတော်အကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်သော
ကျင်းပမည့်နေရာ။ ။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သာစည်မြို့နယ်၊
ကျင်းပမည့်နေ့ရက်။ ။ ၁၃၇၅-ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်နေ့။
ကျင်းပမည့်အချိန်။ ။ နံနက်၊ ၇း၀၀ မှ ၁၂း၀၀ အထိ။
တရားပွဲအစီအစဉ်။ ။ ညစဉ်- ၇း၀၀ မှ ၉း ၀၀ အထိ။
*၁၃၇၅-ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း (၁၄)ရက်။ ၂၃-၅-၂၀၁၃။(ကြာသပတေးနေ့)
အမေ့မေတ္တာရှင်-အရှင်နရိန္ဒ သာသနတက္ကသီလဓမ္မာစရိယB.A Buddhism(MDY),
M.A(SriLanka), PhD Candidate(India) *၁၃၇၅-ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်နေ့ ။ ၂၄-၅-၂၀၁၃။(သောကြာနေ့)
မှတ်ချက်။ ။ ပညာဆက်လက်သင်ယူလိုသော သာမဏေငယ်များအတွက် ပညာဆက်လက်သင်ကြားလိုသည့်
Venjotipala009@gmail.com ဖုန်း၊ +၉၄ ၇၅၄၆၈၇၃၇၃
၂။ မောင်စည်သူ (ရုရှား)/ minhlatharlay@gmail.com
၃။ မသူဇာမြင့် (ရန်ကုန်)/ lwinzarhun@gmail.com/ ဖုန်း- ၀၁ ၅၂၇၃၈၈
၄။ မသီတာလှိုင်ဝင်း (ဧရာဝတီ)/ Nyanmin007@gmail.com/ ဖုန်း- ၀၉. ၄၂၂၅၁၈၉၁၀
၅။ မခိုင်ကေသွယ်(စင်္ကာပူ)/ makaylaygyi@gmail.com/ ဖုန်း- +၆၅ ၉၂၇၉၄၇၇၉
ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံ တိဋ္ဌတု။
Posted by lapyaewon
To avoid all evil, to cultivate good, and to clean one’s mind- this is the teaching of the Buddhas.(Dhammapada) Mahamuni Image(Mandalay)
Hasten to do good and restrain your mind from evil. When one is slow in doing good, one’s mind delights in evil. (Dhammapada) ဥပ္ပါတသန္တိစေတီတော်ကြီး
Health is highest gain, contentment the greatest wealth. A trustworthy person is the best kinsman, Nibbāna the highest bliss.(Dhammapada) မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်
Name-ashinjotipala၊ Location- SriLanka၊ Email-ashinjotipala009@gmail.com
အလင်းနှင့်အအေး မျှကာပေး၊ လောကလူသား ငြိမ်းချမ်းစေဖို့၊ အဝေကနေ ပြုံးပျော်ရွှင်လျှက်၊ ကျေးဇူးပြုတာ လမင်းပါ။ ကျွပ်လဲ တောင်းတလူသားလမင်း၊ ရေအေးမေတ္တာ လင်းသိဥာဏ်နှင့်၊ လောကလူသားငြိမ်းချမ်းစေဖို့ ၊ အဝေးကနေ ပြုံးပျော်ရွှင်လျှက်၊ ကျေးဇူးပြုကာ နေလိုက်ချင်ဘိ။ လပြည့်ဝန်း(သာစည်)
အတွယ်ရှိသမျှ၊ စိတ်သောက၊မုချရှိလိမ့်မည်။တွယ်တာကင်းမှ၊ စိတ်သောက၊လုံးဝကင်းနိုင်သည်။သောကမလွှမ်း၊စိတ်ငြိမ်းချမ်း၊တက်လှမ်း နိဗ္ဗာန်ပြည်။(ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ) မိမိကိုယ်မိမိလိမ်ညာ၍မရ
သူတစ်ပါးကို မကြည်ညိုရင် ကုသိုလ်မရ ရုံဘဲ ရှိမယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မကြည်ညိုရင် အပါယ်ကျတတ်တယ်၊ အကြောင်းကား သူတစ်ပါးကို လိမ်ညာ၍ရသော်လည်း မိမိကိုယ်မိမိလိမ်ညာ၍မရသောကြာင့်တည်း။ မေတ္တာရှင်(ရွှေပြည်သာ) ဆိုဒ်စတင်တည်ထောင်သောနေ့
ဦးဇင်း၏ လပြည့်ဝန်းဆိုတဲ့ ဆိုဒ်လေးကို 25.4.2011 နေ့တွင်ဒကာတော် တောသားလေး www.futurelifemm29.com မှစတင်၍ ဓမ္မဒါနအဖြစ် ပြုလုပ်ပေးခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ Domain ကို နော်ဝေနိုင်ငံမှ စေတနာရှင်မလေးမှ ဓမ္မဒါနအဖြစ် လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ လပြည့်ဝန်းစာကြည့်တိုက်
စိတ်ညစ်ရင် ရေချိုးပါ၊ ရဝေနွယ်(အင်းမ)
I love to receive visitors feedback, suggestion and comments.
Enter your email address: အသိပညာရှာဖွေနေကြပါတယ်။
PhD သို့မဟုတ် လျှောက်ဖို့ဖောက်ခဲ့မိတဲ့ လမ်းတစ်ကြောင်း
EQUALITY IN MEN AND WOMEN
ချမ်းချမ်း(ရွာသူလေး) ရဲ့ နားခိုရာ နေရာလေးပါ......
စာရေးသူ လပြည့်ဝန်း. Designed by တောသားလေး for Domain စေတနာရှင်မလေးမှ လှူဒါန်းပါသည်။.